Ukugqitywa kweNkonzo yeNkonzo yokuNyanga kunye noMenzi | Ukwenziwa kwentsimbi yeHengli
Imisebenzi yethu yokupeyinta isekwe kwi-ISO 9001 eqinisekisiweyo: Iinkqubo zoLawulo loMgangatho ze2015. Sinikezela ngenkonzo yokupeyinta emanzi ezizenzekelayo ezihlaziyiweyo, ebandakanya indawo yokuchwetheza ngemichiza ekwi-intanethi, indawo eyomileyo, indawo yokutshiza ye-electrostatic yanamhlanje kunye ne-oveni enkulu yeshishini. Ngokwesiqhelo sipeyinta olu hlobo lulandelayo lweempahla: iinxalenye zoomatshini beshishini, iinxalenye zoomatshini bezolimo, iinxalenye zoomatshini bokwakha kunye nabanye.
Iingcali zethu zokupeyinta zimanzi ziya kuzisa umgangatho, ukutyabeka umgubo ngexabiso elifanelekileyo kuzo zonke iimfuno zakho zokugqiba ngentsimbi! Kwiworkshop yokupenda kaHengli injongo yethu kukubonelela ngamaqabane ethu ngenkonzo yokupeyinta engagungqiyo, ekumgangatho ophezulu, emanzi. Ubungcali bethu buvela kwiminyaka elishumi elinesibhozo yokugquma iintlobo ngeentlobo zeemveliso kwizicelo ezininzi. Ngeli xesha siqokelele ubutyebi obuhloniphekileyo bolwazi kunye namava aphathelene netekhnoloji yale mihla yokupeyinta emanzi. Siyaqonda ukuba isicelo ngasinye sokwaleka sinokubangela iseti eyahlukileyo yemiceli mngeni. La mava kunye nolwazi lusenza ukuba sikwazi ukubonelela ngenkonzo ebhetyebhetye, engabizi kakhulu kubathengi abaneemfuno ezininzi ezahlukeneyo.
I-QC yethu ihlola ngononophelo zonke ii-intshi zamalungu akho ngaphambi kokuhanjiswa. Kuthathwe, okanye kusiwa kuwe, iinxalenye zakho zifika zilungele ukusetyenziswa ngaphandle komonakalo!
Abapeyinti abanamava bakaHengli baqinisekisa imveliso egqityiweyo. Ukusuka kulungiso lomphezulu kunye nasendlwini yesanti ukuya ekusetyenzisweni ngobuchwephesha, ukuhlala ixesha elide, ukujongana nokusingqongileyo, ukuhombisa ukugqiba! Inkqubo yethu yokubhaka iqinisekisa ukuba akukho zibaleki, iidriphu okanye iisgs ekusetyenzisweni kwenkqubo yokupeyinta emanzi.
Ngaphandle koko, i-HDG, i-zinc plating, i-anodizing, i-power-coating, i-Zinc-Plated, i-Chrome camera, i-Nickel Plated njl, nazo zibonelelwa ngamaqabane ethu. Yintoni enokuhlangabezana nesicelo sakho esahlukileyo.
Egqithileyo IPlasma kunye neNkonzo yokuSika iLangatye
Okulandelayo: Inkonzo yokugoba i-CNC